ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင် Mauritius | MAURITIUS တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင်ရယူခြင်း၊ MAURITIUS တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင်ကိုမည်သို့ရယူရမည်၊ MAURITIUS တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင်ရယူခြင်း၊ MAURITIUS တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင်ရယူခြင်း၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးကိုရယူခြင်း
Mauritius ရှိ Global Business License - Mauritius မှ Global Business License ကိုရယူပါ။
သင်သည် Mauritius အတွက် Global Business License လျှောက်ထားလိုပါက Mauritius ၏ Global Business License အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံရှိပြီးတတ်နိုင်သောလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင့်အတွက်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်လုပ်သည်။
● Global Business License Mauritius ကိုရယူပါ။
●ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင် Mauritius ကိုရယူပါ။
●ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင်လျှောက်ထားမှု Mauritius ။
●ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင်ကြေး Mauritius ။
●ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင်က Mauritius ကုန်ကျတယ်။
● Mauritius ရှိ Global Business License အတွက်လိုင်စင်ရယူခြင်း။
●ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ Mauritius ။
●ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင် Mauritius အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ။
●ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးလိုင်စင် Mauritius အတွက်ရှေ့နေများ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Mauritius အတွက် Global Business License အတွက်အကူအညီပေးသည်။ ၎င်းသည် Mauritius အတွက် Global Business License ရရှိရန်ကူညီသည်။ Mauritius အတွက် Global Business License ရရှိသည်။ Mauritius အတွက် Global Business License အတွက်လျှောက်ထားသည်။ Mauritius အတွက် Global Business လိုင်စင်ရရှိသည်။ Mauritius အတွက် Global Business လိုင်စင်အကြံပေးများ၊ Mauritius အတွက် Global Business လိုင်စင်အကြံပေးများ၊ Mauritius အတွက် Global Business လိုင်စင်ရရှေ့နေများ၊ Mauritius အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Global Business License လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများမှတဆင့်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးလိုင်စင်အတွက်ဥပဒေအကြံပေးများမှကူညီသည်။ Mauritius အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် Mauritius အတွက် Global Business လိုင်စင်ကုန်ကျစရိတ်၊ Mauritius အတွက် Global Business လိုင်စင်အခကြေးငွေအတွက်အချက်အလက်များ၊ Mauritius ရှိ Global Business လိုင်စင်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့် Mauritius အတွက် Global Business လိုင်စင်ရရှိရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုပါပေးသည်။
Mauritius အတွက် Global Business လိုင်စင်၊ Mauritius အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင်ကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ၊ Mauritius အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင်ကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ၊ Mauritius အတွက် Global Business လိုင်စင်အတွက်လျှောက်ထားပြီး Mauritius အတွက် Global Business လိုင်စင်ကိုရယူသည်။ Mauritius အတွက်လိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံ၊ Mauritius အတွက် Global Business လိုင်စင်အကြံပေးများ၊ Mauritius အတွက် Global Business လိုင်စင်ရရှေ့နေများ၊ Mauritius အတွက် Global Business လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှု၊ Mauritius အတွက် Global Business လိုင်စင်အတွက်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၊ Mauritius အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင်ကုန်ကျစရိတ်၊ Mauritius ရှိ Global Business License လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် Mauritius အတွက် Global Business License ရရှိရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, Mauritius အတွက် GBL၊ Mauritius အတွက် GBL ကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ၊ Mauritius အတွက် GBL ကိုဘယ်လိုရယူရမယ်ဆိုတာကိုလည်းလူသိများ, Mauritius အတွက် GBL ကိုရယူမယ်၊ Mauritius အတွက် GBL ကိုရယူမယ်။ , Mauritius အတွက် GBL အတိုင်ပင်ခံ၊ Mauritius အတွက် GBL အကြံပေးများ၊ Mauritius အတွက် GBL ရှေ့နေများ၊ Mau အတွက် GBL ဝန်ဆောင်မှုများ ritius, Mauritius အတွက် GBL အတွက်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ, Mauritius အတွက် GBL ကုန်ကျစရိတ်, Mauritius များအတွက် GBL အခကြေးငွေ, Mauritius အတွက် GBL ၏လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်ကုန်ကျစရိတ်, Mauritius များအတွက် GBL ရရှိရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, Mauritius များအတွက် Forex လိုင်စင်, Mauritius များအတွက် Forex လိုင်စင်ကိုဘယ်လိုရဖို့ , Mauritius များအတွက် Forex လိုင်စင်ကိုဘယ်လို, Mauritius များအတွက် Forex လိုင်စင်လျှောက်ထား, Mauritius များအတွက် Forex လိုင်စင်ရယူ, Mauritius များအတွက် Forex လိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံ, Mauritius များအတွက် Forex လိုင်စင်အကြံပေး, Mauritius များအတွက် Forex လိုင်စင်ရှေ့နေများ, Mauritius များအတွက် Forex လိုင်စင်န်ဆောင်မှုများ Mauritius အတွက်လိုင်စင်၊ Mauritius အတွက် Forex လိုင်စင်၊ Mauritius အတွက် Forex လိုင်စင်၊ Mauritius အတွက် Forex လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ Mauritius အတွက် Forex လိုင်စင်ရရှိရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း။
Mauritius အတွက်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံနှင့် Mauritius ၏ Global Business လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Mauritius ၏ Global Business License အတွက်အကောင်းဆုံးလိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကလျှောက်လွှာကိုလက်ခံပါကကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာ ၁၀၀% အောင်မြင်မှုကိုပေးရန်ဖြစ်သည်။
Mauritius သည်အာဖရိကရှိကျွန်းငယ်လေးဖြစ်ပြီး Mauritius နှင့် Rodrigues ဟုခေါ်သောအဓိကကျွန်းများဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့် Maurle Maurice ဟုခေါ်သော Mauritius ကျွန်းသည် Mauritius သမ္မတနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်သည်။
Mauritius ကိုအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲတွင်အာဖရိကမြေ၏အရှေ့ဘက်သို့ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းသည်မာဒါဂက်စကာ၏အရှေ့ဘက်မိုင် ၈၀၀ ကီလိုမီတာ / ၅၀၀ ခန့်တွင်တည်ရှိသည်။ Mauritius သည်ဒုတိယအကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်ပြီး Mascarenes သို့မဟုတ် Mascareignes ဟုခေါ်သောကျွန်းများကိုပြင်သစ်ဘာသာစကားဖြင့်ခေါ်ယူသောနေရာများရှိသည်။ Mascarenes ကျွန်းများထဲမှအကြီးမားဆုံးကျွန်းသည်ပြင်သစ်နိုင်ငံနှင့်နေရာရှိသော Rununion ဖြစ်သည်။
Mauritius ကျွန်းကိုမီးတောင်လှုပ်ရှားမှုဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၈ သန်းကျော်ကရေထဲမှထခဲ့သည်။
Mauritius သည် ၁၅၀ ကီလိုမီတာ / ၉၃ မိုင်ခန့်ရှိသောကမ်းရိုးတန်းရှိသည်။ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာသည်ပြောင်ပြောင်တောက်နေသောအဖြူရောင်သဲသောင်ပြင်များဖြစ်သည်။ ဥပမာ Le Morne တွင်ရှိသည်။ Mauritius သည်အာဖရိကတိုက်ရှိအနိမ့်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သောဂမ်ဘီယာနိုင်ငံထက်အဆများစွာကျိုးနွံမှုရှိသည်။ Mauritius နှင့်ဥရောပ၊ မြောက်အမေရိကရှိနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Mauritius သည်လူလူဇင်ဘတ်ထက်အရွယ်အစားသေးငယ်သည်သို့မဟုတ် USA ရှိ Delaware ပြည်နယ်ထက်အနည်းငယ်ပိုသည်။ Mauritius ၏အကြီးဆုံးမြို့သည် Port Louis, Mauritius ၏မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်ကျွန်းပေါ်ရှိလူ ဦး ရေ ၁၅၀,၀၀၀ ခန့်ရှိသောလူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။ Mauritius သည်အာဖရိကမြေပေါ်တွင်လူ ဦး ရေထူထပ်စွာရှိပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဤအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာသည်စိုင်းရှဲလ်နှင့်အတူကမ္ဘာ့မြေပေါ်တွင်စီးပွါးရေးအကြွယ်ဝဆုံးနှင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝသောနိုင်ငံများဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်း၏အထင်ရှားဆုံးသောတောင်သည် Piton de la Petite Riviere Noire ဖြစ်ပြီးအနက်ရောင်မြစ်၏အထွတ်အထိပ်ဟုအဓိပ္ပာယ်ရပြီးအမြင့်ပေ ၈၂၈ မီတာ / ၂,၇၁၇ ပေရှိသည်။ စိတ်ကူး Le Morne Brabant တောင်၏ကမ်းရိုးတန်းမှနစ်မြုပ်သွားသောစီးဆင်းမှုသည်အမှန်တကယ်တွင်လုံးဝမတည်ရှိသည့်ကြီးမားသောရေမြုပ်သွားသောရေတံခွန်ကိုထင်ဟပ်စေသည်။ Mauritius တွင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအထင်ရှားဆုံးတံဆိပ်ခေါင်း ၂ ခုမှာ Blue Penny နှင့် Red Penny တံဆိပ်ခေါင်းများရှိသည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဖြန့်ဝေသောတံဆိပ်ခေါင်းများအနက်မှဖြစ်ပြီး ၁၈၄၇ တွင်ဗြိတိသျှအစိုးရမှပေးခဲ့သည်။ Mauritians များသည်တစ် ဦး ချင်းစီကိုဖိတ်ကြားသည်။ မော်ရီတီယန်ပြည်သူ့ဖွဲ့စည်းပုံသည်လူမျိုးပေါင်းစုံယဉ်ကျေးမှုကိုဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်အဓိကအားဖြင့်ရောနှောထားသောလူမျိုးများဖြစ်ကြောင်းနှင့်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိလူများသည်အာရှ၊ အိန္ဒိယ၊ ပြင်သစ်၊ Mauritians အများစုသည်အိန္ဒိယလူမျိုးများ၏ဆွေမျိုးများ ဖြစ်၍ Indo-Mauritians များဖြစ်သည်။ လူ ဦး ရေ၏ထက်ဝက်နီးပါးသည်ဟိန္ဒူဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြသည်။ ကျွန်းများပေါ်ရှိအခြားဘာသာတရားများသည်ရိုမန်ကက်သလစ်နှင့်အစ္စလာမ်ဘာသာဖြစ်သည်။
Mauritians များသည်သူတို့၏တင်းကျပ်သောဓလေ့ထုံးစံများကိုချီးမွမ်းရန်ကိုနှစ်သက်ကြသည်။ မော်ရီတီယန်လူမျိုးအကသည် sega အကဖြစ်သည်။ ဒီအကကအိန္ဒိယအနုပညာစတိုင်မှသက်ရောက်မှုများကိုပြသသည်၊ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဂီတဖြင့်ရွေ့လျားနေသည် - ထူးဆန်းသည်မှာအနုပညာရှင်၏ခြေထောက်သည်မြေပြင်မှမဆင်းပါ။ Sega အကသည်စဲချဲလ်နှင့် La Réunionတို့တွင်အဓိကဖြစ်သည်။
အကျော်ကြားဆုံး Mauritian ပုံပြင်သည် Paul et Virginie သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ် 'Paul and Virginia' တွင်များသောအားဖြင့်ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ဤစာလုံးနှစ်လုံးသည် Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre ၏ ၁၈ ရာစုနှောင်းပိုင်းမှပြင်သစ်ဇာတ်လမ်းမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကျွန်းသည်အလွန်ကျော်ကြားသောကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအချစ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ Mauritius သည်ထူးခြားသောအပင်များနှင့်သဘာ ၀ ဘ ၀ များကြောင့်လူသိများသည်။ လူ့လေ့ကျင့်ခန်းများကြောင့်ဒိုဒီလို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူ့သတ္တ ၀ ါဟာ ၁၇ ရာစုမှာအဆုံးသတ်သွားတယ်။
မြေ၏ ၂% အောက်တွင်ဒေသခံသစ်တောများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသဖြင့်ယခုတင်ပြထားသည့်သတ္တ ၀ ါများ၏သိသာထင်ရှားသောအစိတ်အပိုင်းကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်သည်။
အဆိုပြုထားသောကုမ္ပဏီသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ် Securities Act အရရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရောင်းဝယ်သူလိုင်စင်အပါအ ၀ င်မှတ်ပုံတင်ပုံစံနှစ်မျိုးကိုဆက်လက်ကိုင်စွဲထားသည်။ (Consolidated Licensing and fee Rules 2005 & Financial Services Rules 2007 နှင့် Global Business License (GBL)) တို့၏ဘဏ္Servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုအက်ဥပဒေအောက်တွင်။
ဒီနေ့ကျွန်းသို့လာရောက်လည်ပတ်သည့်အခါသင်ကြုံတွေ့နိုင်သောပန်းရောင်ခိုများနှင့်တောက်တောက်များရှိသည်။ တာလင်းပင်လယ်အော်တွင်လင်းပိုင်များကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်တွေ့နိုင်သည်။ မော်ရီတီယမ်စီးပွားရေးသည်အခြေခံအားဖြင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ သကြား၊ ငါးပြင်ဆင်မှု၊ ငွေကြေးနှင့်အိုင်တီစီမံခန့်ခွဲမှုများကဲ့သို့ပစ္စည်းတပ်ဆင်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Mauritius သည်ဤကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ရှိလုံးဝခြွင်းချက်ရှိသည့်ငါးကိုင်တွယ်နိုင်သောရုံးများရှိသည်။ Mauritius တွင်ကိုင်တွယ်သောငါးကြော်ငါးလေးပုံတစ်ပုံကို EU သို့စေလွှတ်သည်။
Mauritian ထုံးစံဟင်းလျာများတွင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသစ်များ၊ သစ်သီးသစ်ရွက်များပါ ၀ င်သည်။ Mauritian အစားအစာသည်အသစ်အဆန်းနှင့်ထူးခြားသောအရသာတို့ကြောင့်ထင်ရှားသည်။ မော်ရီတီယပ်စ်သည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာ၊ သစ်သီးဝလံစိုက်ခင်းများ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုများအပေါ်မှီခိုနေသည့်စီးပွားရေးကိုရောနှောထားသည်။ ၁၉၈၀ နောက်ပိုင်းတွင်စီးပွားရေးကိုကျယ်ပြန့်စေရန်အစိုးရ၏ကြိုးပမ်းမှုများသည်အသီးအပွင့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးကျွန်းသည်၎င်း၏အတွေ့အကြုံအများစုမှတစ်ဆင့်သကြားထုတ်လုပ်မှုအပေါ်လုံးဝမှီခိုနေခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမြင့်ဆုံးသောအာဖရိကနိုင်ငံများအနက်ဂျီဒီပီသည် ၁၉၉၀ နှင့် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်များအတွင်းလူ ဦး ရေထက်ပိုမိုလျင်မြန်စွာတိုးတက်ခဲ့သည်။
Mauritius Global Business License အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအမည်များ
Global Business လိုင်စင် Mauritius အတွက်အခမဲ့အကြံဥာဏ်၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင် Mauritius ရယူ၊ Global Business လိုင်စင် Mauritius ရယူ၊ Global Business လိုင်စင် Mauritius လျှောက်ထားသည်၊ Global Business လိုင်စင် Mauritius အတွက်လျှောက်လွှာ၊ Global Business လိုင်စင် Mauritius အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, Global Business လိုင်စင် Mauritius ကုန်ကျစရိတ်, Forex လိုင်စင် Mauritius , Forex လိုင်စင် Mauritius ရယူ Forex လိုင်စင် Mauritius, Forex လိုင်စင် Mauritius လျှောက်ထား, Forex လိုင်စင် Mauritius များအတွက်လျှောက်လွှာ, Forex လိုင်စင် Mauritius များအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, Forex လိုင်စင် Mauritius ၏ကုန်ကျစရိတ်။
Mauritius ရှိ Global Business License ကိုဘယ်လိုကူညီမလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Mauritius အတွက် Global Business License အကြံပေးအဖွဲ့သည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်ရန် Mauritius ရှိ Global Business License အတွက်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသည်။
Mauritius ရှိ Global Business လိုင်စင်ကိုမရယူမှီသေချာစွာလုံ့လဝီရိယရှိခြင်း၊ KYC နှင့်သင့်လျော်မှုအကဲဖြတ်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Mauritius တွင် Global Business License လျှောက်ထားပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်အာဏာပိုင်များနှင့်နိဂုံးချုပ်သည်။
လိုင်စင်ချခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် Global Business License Mauritius အတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရောင်းဝယ်ရေး (အထူးသဖြင့် underwriting) - MUR 10 000 000
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရောင်းဝယ်သူ (အထူးသဖြင့် underwriting) - MUR 1 000 000
အဆိုပြုထားသောကုမ္ပဏီအနေဖြင့်လိုင်စင်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးကိုကိုင်ဆောင်ရမည်။ ၄ င်းတို့မှာဘဏ္Servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုအက်ဥပဒေအောက်ရှိ Securities Act2005၊ Securities (လိုင်စင်နှင့်အခွန်အခစည်းမျဉ်းများ ၂၀၀၇ နှင့်ဘဏ္Servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများ ၂၀၀၈) နှင့် Global Business License (GBL) အရရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရောင်းဝယ်ရေးလိုင်စင်ဖြစ်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အ ၀ ရောင်းဝယ်သူ (အာမခံမပါ ၀ င်ပါက) ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အာမခံအရောင်းအ ၀ ယ်များ၏ဖောက်သည်များအတွက်ကြားခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါ
Mauritius ကုမ္ပဏီသည်သင်၏ Clients များအတွက်ပုံရိပ်ကောင်းကိုသရုပ်ဖော်သည်
ဘာကြောင့် Global Business License Mauritius ကိုလိုင်စင်ချပေးတာလဲ။
Mauritius ၏ Global Business License၊ Mauritius ၏ Global Business License နှင့် Mauritius ၏ Global Business လိုင်စင်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုငှားရမ်းသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏ရိုးသားသောကြိုးပမ်းမှုနှင့်သင်၏ Global Business License ရရှိရေးအတွက်အထောက်အပံ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားကိုးနိုင်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရေးအတွက် Mauritius မှ“ သင်၏ဆက်ဆံရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်ဆံရေးရရှိသောကြောင့်ငွေသည်အလိုအလျောက်ဖြစ်ပေါ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဝင်ငွေရကြလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းသင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အများအပြားထပ် client များနှင့်ရည်ညွှန်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Mauritius ရှိ Global Business License ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ဈေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးနှင့်လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့် Mauritius ကိုရှာဖွေနေသည့်ကုမ္ပဏီများသည်နံပါတ် ၁ ဖြစ်လာသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Mauritius ရှိ Global Business License ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ဈေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် Mauritius ၏ Global Business လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အား Global Business License Mauritius ကိုရှာဖွေနေသည့်ကုမ္ပဏီများအားနံပါတ် ၁ ဖြစ်စေခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ Mauritius အတွက်စျေးအသက်သာဆုံး Global Business လိုင်စင်န်ဆောင်မှုများ, Mauritius အတွက် Global Business လိုင်စင်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးရှေ့နေများ, Mauritius အတွက် Global Business လိုင်စင်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအတိုင်ပင်ခံ, Mauritius အတွက် Global Business လိုင်စင်၏စျေးအသက်သာဆုံးအကြံပေးများ, Mauritius အတွက် Global Business လိုင်စင်များအတွက်စျေးအပေါဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ, စျေးအပေါဆုံးရှေ့နေများ Mauritius ရှိ Global Business License အတွက်၊ Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးရှေ့နေများ၊ Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအကြံပေးများ၊ Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်အသက်သာဆုံးရှေ့နေများဖြစ်သည်။
သိရန်လိုအပ် - Mauritius ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင်အတွက်အင်္ဂါရပ်များနှင့်လိုင်စင်သတ်မှတ်ချက်များ
Mauritius ၏ Global Business License အတွက်လျှောက်ထားရန်အချက်အလက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များ
အနည်းဆုံးရှယ်ယာရှင်တစ် ဦး (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှယ်ယာရှင်များအတွက်နိုင်ငံသားကန့်သတ်ချက်မရှိပါ)
အနည်းဆုံးနေထိုင်သူဒါရိုက်တာနှစ် ဦး *
Mauritius Global Business License (GBL) အတွက် ၀ င်ငွေနှင့်ခွဲတမ်းအပေါ်အခွန်မဆောင်ပါ။ _amp_ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရောင်းဝယ်သူလိုင်စင်၊
Mauritius Global Business လိုင်စင် (GBL) အတွက်အရင်းအနှီးအမြတ်ငွေနှင့်အမွေဆက်ခံမှုအခွန်မရှိပါ။ _amp_ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရောင်းဝယ်သူလိုင်စင်၊
Mauritius Global Business License (GBL) _amp_ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရောင်းဝယ်ရေးလိုင်စင်အတွက်ငွေလဲလှယ်မှုထိန်းချုပ်မှုကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ။
ပုံမှန်အခွန်စည်းကြပ်မှုနှုန်း ၁၅% ကိုထိရောက်သောအခွန်နှုန်းဖြင့် ၃% အထိလျှော့ချသည်။
အမြတ်အစွန်း၊ အမြတ်အစွန်းများနှင့်အရင်းအနှီးများကိုလွတ်လပ်သောပြန်ပို့ခြင်း Mauritius Global Business License (GBL) _amp_ Investment Dealer License ။
၎င်း၏လက်ကျန်ငွေစာရင်းနေ့စွဲမှ3လအတွင်း, ကော်ပိုရေးရှင်းစာရင်းစစ်ဘဏ္financialာရေးရှင်းတမ်းများနှင့်အခွန်ပြန် file ဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။
စာရင်းစစ် Mauritius ကဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။
ခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်လိုင်စင်လိုအပ်သောအောက်ပါအမည်များသို့မဟုတ်၎င်းတို့မှဆင်းသက်လာသူများ - ဘဏ်, အာမခံ, အာမခံချက်, ယုံကြည်မှု, ကုန်သည်ကြီးများအသင်း, စင်းလုံးငှား, အဆောက်အ ဦး လူ့အဖွဲ့အစည်း, သမဝါယမ, အစိုးရ, ialကရာဇ်, minicipal, တော်ဝင်, ပြည်နယ် သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိများ၏ထင်မြင်ချက်တွင်သမ္မတသို့မဟုတ်မော်ရေးရှပ်စ်အစိုးရ၏ထောက်ခံအားပေးမှုကိုအကြံပြုသည့်မည်သည့်အမည်မဆို။
ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုဖော်ပြရန်အောက်ပါနောက်ဆက်များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်: လီမိတက်၊ ကော်ပိုရေးရှင်း၊ Incorporated၊ အများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီ၊ Société Anonyme, Société Anonyme àResponsabilitéLimitée, Sociedad Anónima, Berhad, Proprietary, Naamloze Vennootschap, Besloten Vennootschap, Aktiengesellschaft သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာအတိုကောက်။
Global Business Company License ကိုထုတ်ပေးရန်အတွက်ဘဏ္Servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုကော်မရှင် (FSC) သို့ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်လွှဲပြောင်းခြင်း
Mauritius ၏ Global Business License ရရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
လိပ်စာအထောက်အထားပြစာရွက်စာတမ်းမိတ္တူ (ဒါရိုက်တာတစ် ဦး ချင်း၏အသုံး ၀ င်မှုဥပဒေကြမ်း)
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရောင်းဝယ်ရေးလိုင်စင်အတွက်ဘဏ်ရည်ညွှန်းချက် (ဒါရိုက်တာတစ် ဦး စီ)
လက်စွဲစာအုပ်များ - လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလက်စွဲ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီ၊ ဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်၊ တိုင်ကြားမှုများကိုကိုင်တွယ်သည့်မူဝါဒ၊ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးမူဝါဒ၊ လုံခြုံရေးမူဝါဒနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
ကောင်းသောအမြဲတမ်း Apostille အတွက်လက်မှတ်
အပိုဆောင်းအချက်အလက်များ * - ဘဏ္Servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုကော်မရှင်သည်လုံ့လဝီရိယရှိသူအားအကြံပြုနိုင်သည်
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအတည်ပြုရန် FSC သို့မဟုတ်ပြည်တွင်းဘဏ်တို့မှမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုထပ်ဆောင်းစာရွက်စာတမ်းများတောင်းခံနိုင်သည်။
* အကယ်၍ စာရွက်စာတမ်းများသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်မဟုတ်ပါက၎င်းတို့အား notarized translation ဖြင့်လိုက်ပါသင့်သည်။
Global Business License Mauritius တွင်လိုင်စင်ချထားခြင်းအတွက်ငြင်းဆိုခြင်း
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ငွေကြေးခ ၀ ါချခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင်၌ရောင်းဝယ်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်သည်။ Mauritius၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကူးသန်းရောင်း ၀ ယ်မှုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင်ကိုဆန့်ကျင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သော CLIENTS များကိုကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။
ငါတို့နောက်လိုက်တယ် FATF စည်းမျဉ်းများ ကျွန်ုပ်တို့၏ Global Business License Mauritius အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Global Business License ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အလွန်တင်းကြပ်စွာဖြစ်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို Mauritius အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Global Business License ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့မပံ့ပိုးပါ။
ဂလိုဘယ်စီးပွားရေးလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မောရစ်ရှအားကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ချိသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ Mauritius တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင်ရယူပါ.
Mauritius ၏ Global Business License အတွက် Global Business License ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း (သို့) bugging equipment များသို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းသူလျှိုများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းမရှိပါ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင်လျှောက်ထား Mauritius ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ Global Business License service ကို Global Business License Mauritius တွင်သုံးပါ။
Global Business License အတွက် Global Business License ၀ န်ဆောင်မှုများသည် Mauritius ရှိ Global Business License အတွက်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုသောဥပဒေအရနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသည့်တရားမဝင်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားမပေးအပ်ပါ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင်ဆည်းပူး Mauritius သည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင်အတွက်မော်ရီတီးယပ်စ်အတွက်ဂလိုဘယ်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
Mauritius ရှိ Global Business License အတွက် EU နှင့် Offshore Global Business License အထောက်အပံ့ကို Mauritius ရှိကမ်းလွန် Global Business လိုင်စင်ရလို။ အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ဆက်ဆံလုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။ Mauritius အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ offshore Global Business License service သည် Global Business License Mauritius ရှိကမ်းလွန်ရှိ Global Business License ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများက Mauritius မှပေးသော Global Business License ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်မည်သည့်အတွက်မဆိုရောင်းချခြင်း၊ သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် Mauritius ရဲ့ဖြည့်ချင်တယ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်မော်ရီစီယမ်ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။ Mauritius ၏ Global Business License ကိုရယူပါ.
Mauritius ရှိ Global Business License အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအားအထောက်အပံ့မပေးပါဘူး Mauritius ၏ Global Business လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ.
Mauritius ရှိ Global Business လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းမပြုလုပ်ပါ။ Mauritius ၏ Global Business လိုင်စင်ကိုရယူခြင်း.
အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို Mauritius အတွက် Forex လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ခြင်းလည်းမပြုပါ။
Forex လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကုန်သည်များ၊ လက်နက်ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ Mauritius မှာ Forex လိုင်စင်ရယူပါ.
Mauritius ၏ Forex လိုင်စင်အတွက် Global Business License ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းပစ္စယများတပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းသူလျှိုများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းမရှိပါ။ Forex လိုင်စင်လျှောက်ထား Mauritius တွင်ရှိပြီး Forex လိုင်စင် Mauritius တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ။
Forex လိုင်စင်အတွက် Global Business License ၀ န်ဆောင်မှုများသည် Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုသောဥပဒေအရနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသောတရားမဝင်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားမပေးအပ်ပါ။ Forex လိုင်စင်ကိုဆည်းပူး Mauritius သည်။
Mauritius ၏ Forex လိုင်စင်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်တစ် ဦး ချင်းစီ (သို့) မျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပဲ Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်ရရှိရန်အကူအညီလိုအပ်သည်။
Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်အတွက် EU နှင့် Offshore Forex လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကို Mauritius ရှိကမ်းလွန် Global Business လိုင်စင်ရလို။ အန္တရာယ်ရှိနိုင်သောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ဆက်ဆံလုပ်ကိုင်လိုသူများနှင့်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလွန် Forex လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်း Mauritius သို့မပေးပါ။ Forex လိုင်စင် Mauritius ရှိကမ်းလွန် Global Business License ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်စွန့်ပစ်ခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ။
ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများက Mauritius မှပေးသော Forex လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုသည်ကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်တိရစ္ဆာန်များအားသိပ္ပံနည်းကျသည့်အတွက်ကုန်ကြမ်းရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းစမ်းသပ်မှုနှင့် Mauritius`s ဖြည့်ချင်တယ် Forex လိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်မော်ရေးရှပ်တွင် Forex လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။ Mauritius ၏ Forex လိုင်စင်ကိုရယူပါ.
Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအားအထောက်အပံ့မပေးပါ။ Mauritius ၏ Forex လိုင်စင်လျှောက်ထားပါ.
Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းမရှိကြပါ။ Mauritius ၏ Forex လိုင်စင်ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်.
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် Mauritius အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Mauritius Global Business License ရရှိရန်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးမှုအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမပြုမီထို site အသုံးပြုသူများအားသင့်တော်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင်မောရစ်ရှ။
Mauritius ရှိ Global Business License အပြင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအမျိုးအစားများနှင့်တရားစီရင်မှုအမျိုးမျိုးအတွက်လိုင်စင်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။
Mauritius Global Business လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသော ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်က Mauritius အတွက် Global Business License ကိုလျှောက်တဲ့အခါ၊ Mauritius မှာလိုင်စင်နဲ့စတင်ပေမယ့် Mauritius မှာ HR ထောက်ခံမှုအထိကျယ်ပြန့်တဲ့အထောက်အပံ့တွေပေးပါတယ်။ ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်တာက Mauritius မှာငွေပေးချေမှုကိုဖွင့်ပေးတယ်။
Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အခမဲ့အကြံပေး၊ Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်အကြံပေးများ၊ Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ , ။
Mauritius ဂလိုဘယ်စီးပွားရေးလိုင်စင်အတွက်အခြားထူးခြားသော ၀ န်ဆောင်မှုများ
Mauritius အတွက်လိုင်စင်ချခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းမှုအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာ!
ငါတို့အကြီးဆုံး ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Mauritius နှင့် 108 နိုင်ငံများအဘို့။
ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများသည်လည်းကူညီနိုင်သည် ဘဏ်အကောင့် Mauritius နှင့် 108 နိုင်ငံများတွင်ဖွင့်လှစ်။
Mauritius အတွက်လိုင်စင်ချပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများအပြင်လမ်းညွှန်မှုကိုလည်းပေးသည် အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံ.
VoIP ကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည် ဖုန်းနံပါတ် လုပ်ငန်းအဆင့်အတန်းနှင့်အတူ Mauritius နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဖောက်သည်များ။
လိုအပ်ပါတယ် ရောင်းရန်ရှိပြီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း Mauritius ရှိကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ရကိုယ်စားလှယ်များသည်သင့်အား Mauritius ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့၏ လူ့အင်အားအရင်းအမြစ် သင်၏ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးလိုင်စင်အပြီးတွင် Mauritius ရှိအတိုင်ပင်ခံများသည်အထူးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။
Global Business လိုင်စင်အပြင်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကို Mauritius အတွက်ပြည့်စုံသောအကူအညီဖြင့်ထောက်ပံ့သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ကိုစတင်ခြင်း Mauritius ၌တည်၏။
အကောင်းဆုံး Mauritius အတွက်စာရင်းကိုင် Mauritius အတွက်စာရင်းကိုင်အထောက်အပံ့အတွက် 24 *7ကိုရနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၆) နိုင်ငံမှငွေစာရင်းများပြင်ပဝန်ဆောင်မှုကိုပေးပါသည်။
များအတွက်အတန်းထောက်ခံမှုအတွက်အကောင်းဆုံး အဆင်သင့်ကုမ္ပဏီ Mauritius နှင့် 109 နိုင်ငံများတွင်။
Mauritius သို့စွန့် ဦး တီထွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး
ကိုလိုက်ရှာသည် လုပ်ငန်းရှင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး Mauritius သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ ၁၀၇ နိုင်ငံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
သင်၏အဓိက ၀ န်ထမ်းများကို Mauritius တွင်နေရာချထားရန်နှင့်ထောက်ခံရန်လိုအပ်သည် အလုပ်ဗီဇာ Mauritius အတွက်ဒါရိုက်တာများသို့မဟုတ် ၀ န်ထမ်းများအတွက်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကို software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အောင်မြင်စွာကူညီနိုင်ခဲ့သည် web development Mauritius နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၌ blockchain, IOT, web, ecommerce နှင့် app များပါ ၀ င်သောစျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းဖြင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးအရည်အသွေးအဆင့်ကိုရရှိသည်။
Mauritius ရှိ Global Business License ရရှိရန်အတွက်အခမဲ့အကြံဥာဏ်တောင်းခံပါ။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Mauritius ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင်
Mauritius မှ Global Business လိုင်စင်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပေးနိုင်မလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Mauritius အတွက် Global စီးပွားရေးလိုင်စင်ဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား Mauritius ၏ Global Business လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်နှင့်ရရှိရန်ကူညီသည်။
Mauritius အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင်ရယူပါ Mauritius ရှိ Global Business လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ Mauritius တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင်ရယူပါ
Mauritius မှ Forex လိုင်စင်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိူင်မလား။
Forex လိုင်စင်သည် Mauritius ရှိ Global Business License အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီပါက Mauritius ၏ Forex လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်နှင့်ရရှိရန်အတွက် Mauritius အတွက် Forex လိုင်စင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Mauritius အတွက် Forex လိုင်စင်ရယူပါ Mauritius တွင် Forex လိုင်စင်လျှောက်ထားပါ Forex လိုင်စင်ကို Mauritius မှာရယူပါ
Mauritius ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင်ကိုရရန်သင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပြီးရိုးသားသောစီးပွားရေးပုံစံရှိရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သော Global Business License အကြံပေးများနှင့်ရှေ့နေများ Mauritius ရှိ Global Business License အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုကူညီပေးနိုင်သည်။ Mauritius ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ Mauritius ရှိ Global Business လိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်သင့်အားကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် Mauritius ၏ Global Business License ကိုလျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီသည်။
Forex လိုင်စင်ကို Mauritius မှာဘယ်လိုရနိုင်လည်း Mauritius မှာလူသိများတယ်။
Mauritius ရဲ့ Forex လိုင်စင်ရဖို့အတွက်ငါတို့ကူညီနိုင်မှာပါ။ သင်တတ်နိုင်သမျှ Forex လိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံနှင့် Mauritius ရှိလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင့်ကို Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်၊ Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများ၊ Forex အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်သင်ကူညီနိုင်သည်။ စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် Mauritius ၏ Forex လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်ကူညီပေးပါသည်။
သင်၏ Forex လိုင်စင်ကို Mauritius တွင်ရယူပါ သင်၏ Forex လိုင်စင်ကို Mauritius တွင်ရယူပါ
သင်၏ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးလိုင်စင်ကို Mauritius တွင်ရယူပါ သင်၏ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးလိုင်စင်ကို Mauritius တွင်ရယူပါ
Mauritius Global Business လိုင်စင်ရရှိရန်သင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်နှင့်ရိုးသားသောစီးပွားရေးပုံစံရှိရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သော Global Business License အကြံပေးများနှင့်ရှေ့နေများ Mauritius ရှိ Global Business License အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုကူညီပေးနိုင်သည်။ Mauritius တွင် Mauritius ရှိ Global Business License အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်သင့်အားကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် Mauritius ၏ Global Business License ကိုလျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီသည်။
Mauritius တွင် Forex လိုင်စင်ကိုဘယ်လိုရယူရမလဲ၊ Mauritius မှာလည်း Forex လိုင်စင်ကိုလူသိများတယ်။
Mauritius Forex လိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်တတ်နိုင်သမျှကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သော Forex လိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့် Mauritius ရှိလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်လျှင်ကူညီနိုင်သည်။ Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများ၊ Forex လိုင်စင်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုသင်ကူညီနိုင်သည်။ ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် Mauritius ၏ Forex လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်ကူညီပေးသည်။
ငါ၏ Forex လိုင်စင်ကို Mauritius မှာရယူပါ ငါ့ Forex လိုင်စင်ကို Mauritius မှာရတယ်
ကျွန်ုပ်၏ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို Mauritius မှာရယူပါ ကျွန်တော့်ရဲ့ Global Business License ကို Mauritius မှာရပါတယ်
Mauritius ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်အတွက်အဓိကကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကိုအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အထူးအကူအညီအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်မှာအဘယ်နည်း။ Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်အခကြေးငွေလည်းဖြစ်သည်။
Mauritius Forex လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုဤစာမျက်နှာ၏နိဒါန်းအပိုင်းတွင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်ခ Mauritius ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | Mauritius ရှိဂလိုဘယ်စီးပွားရေးလိုင်စင်ခ Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | Mauritius အတွက် Forex လိုင်စင်၏အခကြေးငွေ
Mauritius ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | Mauritius ရှိ Global Business License အတွက်အခကြေးငွေများ
အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ - Mauritius တွင်ငွေကြေးဆိုင်ရာလိုင်စင်ချထားပေးခြင်း
Mauritius အတွက်ဘဏ္Financialာရေးလိုင်စင်အတွက်အသုံးဝင်သော Links များ
ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းရှိဘဏ် ၄၇၁ ခုအတွက်စီးပွားရေးနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဘဏ် ၀ န်ဆောင်မှုများ။
Mauritius ရှိမည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဆိုဘဏ်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံးဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ထောက်ခံမှု။
နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့် Mauritius ၏လိုအပ်ချက်များ၊ အခကြေးငွေများ၊ ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ကန ဦး အပ်ငွေစသည်ဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည်။
Mauritius အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့သည် Mauritius အတွက်ဘဏ်အကောင့်များအောင်မြင်မှုနှုန်းနှင့်အတူစျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းကိုကမ်းလှမ်းသည်။
Mauritius အတွက်အထောက်အပံ့ပေးသော Mauritius အတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံ, Mauritius ရှိတစ် ဦး ချင်းစီ, အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကုမ္ပဏီကြီးများ။
ဖောက်သည်များအားဘဏ်စာရင်းအထောက်အပံ့ပေးသော Mauritius အတွက်အတွေ့အကြုံရှိသောဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုအတိုင်ပင်ခံများနှင့် Mauritius အတွက်ကိုယ်စားလှယ်များ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Mauritius ရှိတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးသမားများအတွက် Mauritius တွင်ဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေနေသောအကောင်းဆုံးကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
Mauritius အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့မှ Mauritius တွင်ရှိသောကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်၏ထိပ်တန်းဘဏ်စာရင်းကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဘဏ်လုပ်ငန်းအထောက်အပံ့ဖြစ်သည်။
Mauritius အတွက်ကုန်းတွင်းနှင့်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Mauritius တွင်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုများပေးစွမ်းနိုင်အောင်သင်၏ဘာသာစကားကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Mauritius အတွက်နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံနှင့်ဘဏ် ၄၇၂ ခုအတွက်လည်းဘဏ်လုပ်ငန်းအထောက်အပံ့များပေးလျက်ရှိသည်။
Mauritius ရှိ GBL ၏အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ Mauritius ရှိ GBL အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ Mauritius ရှိ GBL အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ Mauritius ရှိ GBL အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ Mauritius ရှိ GBL အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေအကြံပေးများ၊ Mauritius ရှိ GBL အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ Mauritius၊ Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ Mauritius ရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများလည်းဖြစ်သည်။
Mauritius အတွက် Global Business လိုင်စင်ကိုထုတ်ပေးသည်။ ဘဏ္Servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုအာဏာပိုင် Mauritius ၏